Tolvanera: kedu ihe ọ bụ, njirimara, mbido ya na nsonazụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Oge udu mmiri na nke kacha ekpo ọkụ n’oge ọkọchị bụ ọnọdụ dị mma maka ekike ala nke uzuzu n’elu ala. Eddies nke uzuzu a maara aha ha hopper. A makwaara ha dị ka mmụọ ọjọọ uzuzu ebe ọ bụ na ha ruru ogo dị elu ma nwee ike ịmịpụta oke ikuku.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara igwe ntụ, otu esi akpụ ya na ihe nsonaazụ ọ nwere.
2 Nhazi nke hopper
3 Mbibi chute
N'oge udu mmiri, mpaghara na-etokarị n'ihi ụkọ ahịhịa. A anyị tinye Mbelata na ihere iru mmiri ọ na-aghọ mma ọnọdụ e guzobere ájá eddies na ala. Eddies ndị a nwere ike ịmepụta oke ikuku nke ikuku nke nwere ike imebi ihe di iche iche. Ihe mkpofu uzuzu abughi ihe kariri ikuku ikuku nke di ka odida nke oke ikuku na anata aha ndi ozo dika revolvín, ikuku oku, na ndi ozo.
Ọ bụ mmelite nke ikuku nwere ntụgharị nke nha agbanwe. Ọtụtụ oge hopper dị obere na obere oge. Ọ na-adịkarị obere ọkara mita na dayameta na ọ bụ naanị mita ole na ole dị elu. Oge a na-adịkarị ihe dị ka nkeji ole na ole. Agbanyeghị, enwere oge mgbe ọ ga-ebu nnukwu ma sie ike. Mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike ịrị elu na mita 1.000 n'ogo ma na-ebupụta ifufe gburugburu ya nke ruru 100 kilomita kwa elekere. Mgbe ụfọdụ, achọpụtara ihe eji eme ihe ruo minit 20.
Nhazi nke hopper
Eddies uzuzu ndị a na-etolite mgbe ikuku na-ekpo ọkụ dị nso na elu. Igwe ikuku ekwuru, na-ekpo ọkụ karị, pere mpe ma na-ebili ngwa ngwa. Ozugbo ọ ruru elu dị elu, ọ na-ahụ ikuku oyi na-atọ ụtọ n'elu. Ọ bụrụ na ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mma, mmelite a na-amalite ịtụgharị site na nke a na-akpọ Coriolis mmetụta. Ihe mmetụta Coriolis bụ n'ihi ntụgharị nke ụwa. Ebe ọ bụ na ikuku na-ebili na-ebili na mberede, kọlụm ikuku na-amalite ịgbatị kwụ ọtọ ma na-ebute nsụgharị ntụgharị dị egwu site n'ụkpụrụ anụ ahụ nke nchekwaba oge angular.
Enwere ike ịsị na hopper dị ka anwụrụ ọkụ nke ikuku na-ekpo ọkụ na-aga ọtụtụ ma gbagoo dị ka ntụziaka nke ntụgharị n'ime ya. Ka ikuku na-ekpo ọkụ na-ebili ọ na-efunahụ ya ma kwụsị ịrị elu. N'ụzọ dị otú a, ọ na-amalite mbido ya site na mpụga nke isi nke eddy ahụ. Mgbada nke ikuku oyi na-amalite itule ikuku na-ekpo ọkụ nke na-agba site na mpụga. N'ụzọ dị otu a, ị nwere usoro kwụsiri ike.
Enwere ike ịsị na enwere ike ịkwado hopper n'onwe ya ka ọ na-agbanwe na ala nke na-adị oke ọkụ. Ọ na-etolite na mbara ọzara, ọzara ma ọ bụ mbara ala. Typesdị ala ndị a na-ekerịta njirimara nke inwe ike ikpo ọkụ na-adị mfe karị n'ihi ọrụ nke radieshon nke anyanwụ. Ka a na-enyocha ikuku na-ekpo ọkụ nke dị n'akụkụ ya n'akụkụ kachasị elu nke olulu ahụ, ikuku dị jụụ sitere na gburugburu na-agwụ. Mgbe mmiri a na-ewere ọnọdụ, hopper na-agbasasị n'ihe gbasara sekọnd. Nke a na-abụkarị mgbe mpịgharị adịghị ngwa ngwa iji kwado ọsọ. O nwekwara ike ime na hopper na-apụ n'anya mgbe ọ gafere mpaghara ala ebe okpomọkụ dị na ala dị ala.
Ihe na-akwọ ụgbọala na-esochi egwu bụ oke ala dị elu iji kwe ka ikuku ikuku ọkụ na-ebili.
Ugbu a, anyị ga-ahụ mmebi ọ bụla enwere ike ibibi ngwa ngwa site na ọrụ ya na mkpughe ya. Ngosipụta na uzuzu uzuzu nwere ike ịkpata ọnọdụ ahụ ike dị iche iche dịka nfụkasị, mmetụta dị na sistemu nchekwa ahụ, mmetụta na-adịghị mma na akpụkpọ ahụ, anya na mucosa. N'ihi ikpughe ihe a, ụfọdụ mmetụta nwere ike ime dị ka mkpụmkpụ nke ume, tonsillitis, pharyngitis, bronchitis, ka oyi baa, ụkwara ume ọkụ, ọnọdụ obi, afọ ọsịsa na ụfọdụ ndị ọzọ.
N'ebe tolvanera na-adịkarị, enwere nsogbu ịnọ n'ụlọ akwụkwọ na ọrụ yana mmụba nke mmefu na ahụike na ụlọ ọgwụ. Ihe omuma atu nke a bu mpaghara odida anyanwu di na ala ugwu ugwu Maribios. Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị emetọ n'ala nke emetụtagoro usoro igbukpọsị ihe karịrị afọ 50. Dị ka a ga-atụ anya ya, usoro mgbukpọ a na-aga n'ihu na-emepụta mpaghara ndị na-adịghị mma na mbara ala ndị na-enye aka maka mmalite nke ihu igwe. Na mgbakwunye, anyị ga-agbakwunye n'eziokwu na ebe ndị a etinyelarị mgbagha na-aga n'ihu na-aga n'ihu nke ihe ndị na-egbu egbu n'etiti nke anyị na-ahụ ọgwụ ahụhụ, ahịhịa na nri. Chemicals niile a na-emebi emebi nke ala ma na-atụgharị ebe na-amị amị n'ọtụtụ ebe kpọrọ nkụ.
Dị ka anyị hụrụ ná mmalite nke isiokwu ahụ, ndị a bụ ebe kwesịrị ekwesị maka ọgbọ nke ájá. Uzuzu nke na-esi n’ala ala akọrọ na-apụta bụ nke na-eburu ihe fọdụrụ n’ime ihe ndị na-emerụ ahụ nke na-emerụ ahụ ike. Otu ihe a na - eme na nje na nje virus, pollen, spores, ihe ọkụkụ na ụmụ ahụhụ na - emetụta ụmụaka, ụmụ nwanyị dị ime na ndị agadi. N'ihi nke a, dumpster na-ewepụta ntụ ntụ nke a ga-ewere maka ahụike.
A ghaghị iburu mmetụta ndị sitere na nsị ahụ n'uche. Naanị otu afọ, ihe karịrị mmadụ 3000 metụtara na mpaghara Pacific na mpaghara etiti mba ahụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu ihe ájá dị na ya na mmetụta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Hopper